ကလေးမြို့နယ်က သနားဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်ဆိုး …. – Messi Club
ကလေးမြို့နယ်က သနားဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်ဆိုး ….
ကလေးမွို့နယျက သနားဖှယျရာဖွဈရပျဆိုး ….
ကလေးမွို့ပျေါတှငျ စဈတပျက ပဈခတျသော လကျ နကျ ကွီးကညျြထိမှနျ၍ သဆေုံးသူ ပွညျသူ ၃ ဦးကို သဂွိုလျပွီးစီး
ရနျကုနျ၊ မေ ၂၉
စဈကိုငျးတိုငျး၊ ကလေးမွို့နယျတှငျ စဈတပျက ပဈခတျသော လကျနကျကွီးကညျြထိမှနျ၍ ၆ လသားအရှယျ ကလေးငယျမိခငျ ၁ ဦး နှငျ့ စဈဘေးရှောငျ သား အမိ ၂ ဦး စုစုပေါငျး ပွညျသူ ၃ ဦး သဆေုံးပွီး ယနေ့ ညနပေိုငျး ၃ ဦးလုံး သဂွိုလျပွီးစီးပွီဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
မလေ ၂၈ ရကျနေ့ ည ၇ နာရီဝနျးကငျြမှစတငျပွီး စဈကောငျစီတပျမြားက ကလေး မွို့နယျ၊ တာဟနျးရပျ ကှကျကို လကျနကျကွီးမြားဖွငျ့ ပဈခတျကွောငျး ၊
စဈတပျက ပဈခတျသော လကျနကျကွီးကညျြသညျ တာဟနျးရပျကှကျ မတ်ေတာ (Agape) ဆေးရုံအနောကျဖကျ ကပျရပျ နအေိမျတဈခုပျေါသို့ ကရြောကျ ပေါကျကှဲကာ အမြိုးသမီး ၂ ဦးနှငျ့ အမြိုးသား ၁ ဦး သေ ဆုံး ခဲ့ခွငျးဖွဈ ကွောငျး သိရှိရသညျ။
စဈကိုငျးတိုငျး၊ မငျးကငျးဘကျမှ စဈဘေးရှောငျလာသော အသကျ ၄၅ နှဈအရှယျ ဒျေါနီနီအေး နှငျ့ အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျ သားဖွဈသူမောငျးဘုနျးမွတျဦးတို့ ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးကွောငျး ၊
အသကျ ၂၅ နှဈအရှယျ ကလေးမိခငျ MC Vanlalawmpuii (Puipui) လညျး သဆေုံးသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ ၃ ဦးစလုံး သဂွိုလျပွီးစီးပွီဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
ကလေးမြို့ပေါ်တွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သော လက် နက် ကြီးကျည်ထိမှန်၍ သေဆုံးသူ ပြည်သူ ၃ ဦးကို သဂြိုလ်ပြီးစီး
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့နယ်တွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်၍ ၆ လသားအရွယ် ကလေးငယ်မိခင် ၁ ဦး နှင့် စစ်ဘေးရှောင် သား အမိ ၂ ဦး စုစုပေါင်း ပြည်သူ ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ယနေ့ ညနေပိုင်း ၃ ဦးလုံး သဂြိုလ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မေလ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီဝန်းကျင်မှစတင်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်များက ကလေး မြို့နယ်၊ တာဟန်းရပ် ကွက်ကို လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ကြောင်း ၊
စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကျည်သည် တာဟန်းရပ်ကွက် မေတ္တာ (Agape) ဆေးရုံအနောက်ဖက် ကပ်ရပ် နေအိမ်တစ်ခုပေါ်သို့ ကျရောက် ပေါက်ကွဲကာ အမျိုးသမီး ၂ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၁ ဦး သေ ဆုံး ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မင်းကင်းဘက်မှ စစ်ဘေးရှောင်လာသော အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ဒေါ်နီနီအေး နှင့် အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် သားဖြစ်သူမောင်းဘုန်းမြတ်ဦးတို့ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကြောင်း ၊
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကလေးမိခင် MC Vanlalawmpuii (Puipui) လည်း သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ၃ ဦးစလုံး သဂြိုလ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။